Moments leh saaxiibo 12
Haddii ay run tahay in aysan jirin muraayado yar yar, muraayado iyo walxo aan ka jirin maanku, waxay u muuqdaan sida waxbarashooyinka muusikada, marka laga hadlayo, halkaa ka yimaadaan macluumaadka iyo waxbarista falsafada iyo inta badan dabeecadda, oo qaar ka mid ah dhexdhexaadiyeyaashu ay shaki ku galaan?
Wax baridda nooc kasta ha noqotee waxay ku sii jeeddaa qiimeheeda ama gudaha lafteeda. Dhammaan waxbarista waa in lagu xukumaa waxa ay mudan yihiin, iyadoon loo eegaynin halka ay ka yimaadeen ama mas'uulka ka yihiin. Waxay kuxirantahay kartida qofka helaya barida inuu awood uleeyahay inuu xukumo waxbarida qiimaha saxda ah. Waxbarida qaarkood waxay wejigooda wejiga ku heysaa waxa jira oo dhan, halka kuwa kalena ay tahay in la fiirsado, laga fekero oo laga fiirsado kahor inta macnaha dhabta ah la garto. Inta badan kuwa dhexdhexaadka ah way jilicsan yihiin oo jilicsanaadaan markay arkaan, dhagaystayaashuna waxay si yaab leh ula yaabaan hadaladaas. Mararka qaar qof dhexdhexaad ah ayaa heli kara ama ku soo celin kara hadaf falsafad-falsafadeed, kaas oo la sheegay in qaar ka mid ahi xakameeyaan. Marka waxbarista falsafadda falsafadda ama fiqi ahaan lagu bixiyo dhexdhexaad, waxaa la dhihi karaa inay ka timid mid dhexdhexaad ah, ama nin xigmad leh oo weli jidhka ku dhex nool, ama kii bartay inuu isagu kala sooco oo ku noolaado si ka duwan wuxuu ka yimid jirka, ama wuxuu ka imaan karaa mid ka tagay noloshan, laakiin isagu iskama fogeyn damaciisa jirkiisa kaas oo markaa ku xidhma dunida oo aan ku hoos jirina xaalada kooma ee uu ninka caadiga ahi ku gudbo. dhimashada iyo dhimashada ka dib.
Barida u qalanta halka laga yaabo inay ka imaan karto mid kasta oo ka mid ah ilahaan, iyadoo loo marayo meel dhexe, ha ahaato qeybta hoose iyo in kale. Laakiin waligaa looma baahna in waxbaridda la qiimeeyo maxaa yeelay waxay ka timaadaa il taas oo loo arko “awood.”
Miyay shaqeeyaa dhintay si gooni ah ama si wadajir ah si ay u gaaraan dhammaadka qaar?
Maxaan ula jeednaa “kuwii dhintay?” Jidhku wuu dhintaa oo waa la kala qaadaa. Wax shaqo ah ma dhinto geerida ka dib qaabkiisana waxaa lagu shubaa hawo khafiif ah. Haddii "kuwa dhintay" loola jeedo rabitaannada shakhsi ahaaneed, markaa waxaan dhihi karnaa waxay ku sii nagaadaan in muddo ah, oo damacyada shaqsiyadeed ee noocaas ahi waxay ku sii socdaan dadaalkooda si ay u helaan shay ama alaabtooda. Mid kastoo ka mid ah kuwa dhintay waa inay u shaqeeyaan danahooda gaarka ah, sababtoo ah maadaama midkasta uu u shaqeeyo rabitaankiisa shaqsiyeed kama quseeyo gaaritaanka waxyaabaha qaar ee dadka kale. Haddii dhinaca kale, “dhinto” loola jeedo qayb ka mid ah nafta qofka oo sii jira ilaa nolosha ilaa nolosha, markaa waxaan dhihi karnaa wuu noolaan karaa geerida ka dib adduunyada fikradihiisa iyada lafteeda la dhisay, iyo raaxeysiga shaqsiyadeed , ama ujeeddooyinkeeda ayaa laga yaabaa inay ahaadaan sida in lagu daro ujeedooyinkooda nolosha dadka kale, oo ay dhacdo in dadkii ka tegey ay sii noolaadaan ama ay la qabsadaan fikradaha ay abuurtay inta lagu guda jiro nolosha dhulka. Dhulkan waa meesha loogu shaqeeyo. Kuwii dhintay waxay u gudbaan xaalad u diyaar garow nasasho ah ku soo laabashadooda adduunkan oo ay u shaqeeyaan. Iftiiminnada aan dhiman karin ee ku dhex shaqeynaya jirkooda jireed ee dunidan, qaar waxay ka shaqeeyaan adduunkan inay gaaraan ujeeddooyin gaar ah shaqsi ahaan, halka kuwo kalena ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii ay ugu dambayn lahaayeen. Mid kasta oo ka mid ah fasalka koowaad wuxuu si iskiis ah ugu shaqeeyaa dantiisa gaarka ah. Fasalka kale wuxuu u shaqeeyaa si shaqsi iyo si wada jir ah wanaaga dadka oo dhan. Tani waxay qusaysaa labadan fasaladood ee aan gaarin dhimashadooda, taasoo macnaheedu yahay geeridu weligeed aan kala go 'lahayn iyo jiritaanka miyir-beel joogto ah iyada oo loo marayo dhammaan gobollada iyo shuruudaha oo dhan. Kuwa sida ay u dhintaan nolosha weligeed ah waxay ku shaqeyn karaan dhimashada jirka ka dib waligood shaqadooda ama wanaagga dadka oo dhan. Noloshu waa meesha shaqo ee dunidan loogu talagalay dadnimada caadiga ah. Gobolka ka dib geeridiisa kama shaqeeyo, maadaama waqtigaasi yahay waqtiga nasashada.
Sidee buu kan dhintay u cunaa, haddiiba? Waa maxay noloshooda?
Cunnadu waa lama huraan si loo joogteeyo jiritaanka jirka nooc kasta ha ahaadee. Dhagaxyada, dhirta, xoolaha, ragga iyo ilaahyadu waxay u baahan yihiin cunno inay sii wadaan jiritaanka. Cuntada mid keliya maahan cunnada. Boqortooyo walba waxay u isticmaashaa cuntada boqortooyada ka hooseysa iyaduna waxay cunto u noqotaa boqortooyada ka sarreysa. Tan macnaheedu maahan in jidhka guud ee boqortooyadu uu yahay cuntada kale, laakiin in nuxurka jidhkani yahay cuntada laga soo qaatay boqortooyada hoose ama loo soo bandhigay boqortooyada kor ku xusan. Maydadka dadku waxay cunto u yihiin dhulka, dhirta, iyo dixiriga. Jirka adeegsaday cuntadu wuxuu sii wadaa jiritaankiisa cuntada, laakiin cuntada cuntaas oo kale ma aha cunnadii loo adeegsan jiray si loo sii wado jiritaanka jirkiisa jir. Geerida ka dib ninka dhabta ahi wuxuu u gudbaa xaalad nasasho iyo raaxo, kaliya kadib markuu ka soocdo damacyada guud ee nolosha jirkiisa. Xiriirkiisa uu la leeyahay damacyadan isaga oo la xiriira xiriirka jireed waxa uu siiyaa damacyadan xuub ahaanta aadanaha iyo damacyadan ayaa waxoogaa fikir ah, laakiin kaliya dareenka ah in dhalada galaaska ay kaqeyb qaadato carafta udgoonkii cadarka ay ku jirtay. Kuwani badanaa waa hay'adaha soo ifbaxa geerida kadib. Waxay ku sii wadaan jiritaankooda cuntada. Cuntoodu waxaa loo qaataa siyaabo fara badan, marka loo eego dabeecadda gaarka ah ee hay'addu leedahay. Si loo sii wado rabitaanka ayaa ah in lagu celiyo. Tan waxaa lagu samayn karaa oo keliya iyada oo la waajaho rabitaanka gaarka ah iyada oo loo marayo jirka jireed ee aadanaha. Haddii cunnadan loo diido nolosha aadanaha ayaa damaceedu is gubi doonaa oo waa la baabi'i doonaa. Foomamka noocaas ahi ma cunaan cunto jireed, maxaa yeelay ma haystaan ​​qalab jireed oo ay ku tuuraan cuntada jidhka. Laakiin rabitaanka iyo hay'adaha kale, sida waxyaabaha dabiiciga ah, waxay sii wadaan jiritaankooda qaab ay urayaan urka cunnada. Marka macno ahaan waxaa loo oran karaa inay ku noolaadaan urka cuntooyinka, taas oo ah nooca ugu weyn cuntada ay awoodaan inay adeegsadaan. Iyadoo la tixraacayo xaqiiqadan, fasalada qaarkood ee waxyaabaha aasaasiga ah iyo qeybaha rabitaanka bini-aadamka ayaa waxaa soo jiitay deegaanno gaar ah ur ka yimaada cuntada. Urta udgoonku u badan yahay cufnaanta iyo dareenka ayaa noqoneysa cidda soo jiidaneysa; Hay'adaha pre-aadanaha, aasaasiga ah, splis dabiiciga ah ayaa la soo jiitaa oo loo huraa gubashada fooxa. Gubashada fooxa ayaa soo jiidata ama ka celisa fasalada noocaas ah ama hay'adaha sida ay yihiin. Macno ahaan "kuwii dhintay" ayaa la dhihi karaa inay cunaan. Fikrad ka duwan tan mabda'a miyirka leh ee ku nool jannada ugu fiican ama xaalad nasasho ah waxaa sidoo kale la dhihi karaa cun cun si loo sii wado jiritaankiisa gobolkaas. Laakiin cuntada uu ku nool yahay waa fikradaha ku habboon noloshiisa; marka loo eego tirada fikradihiisu fiicnaa wuxuu siiyaa cuntada uu cuno dhimashadiisa ka dib. Runtu waxaa calaamad u ah Masriyiinta qayb ka mid ah Buuggooda Dhimashada taas oo la muujiyey in naftu markay soo martay hoolka labada xaqiiqadood oo miisaan lagu miisaamo, una gudubtay beeraha Aan Ru. , halkaas oo ay ka hesho sarreen koritaanka leh saddex iyo shan iyo toddoba dhudhun. Kuwa baxsaday waxay ku raaxeysan karaan oo keliya muddada nasashada, dhererka taas oo lagu go'aaminayo fikirradiisa ku habboon inta ay dhulka joogaan. Markay kuwanu daalan yihiin ayuu mar kale dhulka ku soo noqonayaa.
Miyuu dhintay dhiman dharka?
Haa, laakiin marka loo eego qaab dhismeedka jirka in loo xidho, ee fikirka iyaga abuuray iyo dabeecadda loogu talagalay inay muujiyaan. Dharka nin ama qolo kasta waxay astaan ​​u tahay astaamaha qofka ama dadka. Ka sokow adeegsiga dharka sidii looga ilaalin lahaa cimilada, waxay muujinayaan waxyaabo u gaar ah dhadhanka iyo farshaxanka. Tani waa natiijadii fikirkiisa oo dhan. Laakiin si aan si toos ah uga jawaabno su'aasha, waxaan dhihilahaa waxay kuxirantahay halka ay kujiraan dadka dhintay sida inay dhar xidhaan iyo inkale. Markii si dhaw ulaxiriiraan fikirka aduunka hey'ada ka tagtay waxay sii hayn doontaa caadooyinka iyo caadooyinka aduunka bulsheed ee ay kudhaqaaqday, iyo hadii hey'ada noocan oo kale ah la arki karo waxay kasoo muuqan laheyd dharka sida ugufiican u jeceshahay. Waxay u muuqan doontaa dharka noocan oo kale ah maxaa yeelay wax kasta oo fikirradiisu ay tahay, inay ahaan laheyd, iyo dharka uu qofku si dabiici ah ugu xiran doono fikirkiisa ayaa ah kuwa uu isticmaali lahaa inta uu nool yahay. Haddii, si kastaba ha noqotee, fikradaha tagtay waa inay isku beddelaan xaalad oo xaalad kale u beddelaan, ka dibna wuxuu ka muuqan doonaa dharka uu fikir ahaan u qaadan lahaa, si uu ugu haboonaado xaaladda. Si kastaba ha noqotee, iyadoo loo eegayo fikirka aadanaha, dharka waxaa loogu talagalay in lagu qariyo cilladaha ama hagaajinta qaabka, illaa iyo inta laga ilaaliyo ama laga ilaaliyo cimilada xunxun, laakiin waxaa jira meel loo gudbiyo geerida ka dib iyo halka lagu arko sida uu runtii yahay oo aan ahayn sidii dhar u ekaysiiyay inuu u muuqdo inuu yahay. Xawaarahaan wuxuu ku jiraa iftiinka ilaahiisa, oo u arkaa isaga siduu yahay oo u xukuma si qumman. Meeshaasna qofku uma baahna dhar ama wax ilaalin ah, maaddaama uusan ku xidhnayn ama uusan saameyn ku yeelanaynin fikirka dadka kale. Markaa “kuwa dhintay” ayaa la dhihi karaa inay xidhaan dhar haddii ay iyagu u baahan yihiin ama dhar u baahan yihiin, waxaana la odhan karaa waa inay xidhaan dharka loo baahan yahay in la garto, la qariyo ama jirkooda la ilaaliyo iyada oo la raacayo shuruudaha ay ku sugan yihiin.
Miyuu dhintay miyuu ku nool yahay guryo?
Dhimashada ka dib jirka jirku wuxuu si adag ugu xidhan yahay shandadiisa alwaax, laakiin qaabka jidhka, jirka astral, kuma sii jiro gurigaas. Waxay faafisaa sida jirku uga hadlayo qabriga; aad u badan dhinaca jirka. Qofka ku nool jirka, wuxuu ku nool yahay xaaladahaas ama jawigaas oo inta badan la jaan qaadaya dabeecadiisa. Haddii fikradeeda ugu weyni ay ahayd sida in lagu soo jiito guri gaar ah ama agagaarkiisa, way ku jirtaa fikirka ama joogitaanka. Tani waxay qusaysaa jirka rabitaanka, laakiin cidda ku nool adduunkeeda ugu fiican geerida - oo badanaa loo yaqaan jannada - ha ku noolaan karto guri, iyada oo u maleyneysa inay u maleyneyso guri maxaa yeelay waxay rinjiyeyn kartaa sawir kasta oo uu jecel yahay. Guriga haddii ay jiraanba wuxuu ku noolaan lahaa guri ku habboon, oo lagu dhisay fikirkiisa, oo aan ku dhisneyn gacmaha dadka.
Miyuu hurdo u dhintaa?
Dhimashadu lafteedu waa hurdo, oo waa hurdo dheer ama gaaban haddii ay hay'addu ka shaqaysay dunidan. Hurdadu waa wakhti nasasho ah, oo ah ku-meel-gaadh ka joogsi dhaqdhaqaaq kasta oo diyaaradda ka dhaca. Maskaxda sare ama ego ma seexdo, laakiin jidhka ama jidhka u shaqeeya ayaa u baahan nasasho. Nasashadaas waxaa loo yaqaan hurdo. Marka jirka jirka, dhamaan xubnahiisa, unugyadiisa iyo moleekuleydu waxay hurdaan ama leeyihiin waqti si kastaba ha noqotee ama ha ahaato mid gaaban ama waqti dheer, taas oo u oggolaaneysa iyaga inay isu dheellitirnaadaan awood ahaan iyo koronto ahaan xaaladdooda.